Nzukọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha na Social 2011 | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị ga - enwe ọganihu, ị ga - enwe ohere ịga nke ọma n'ịde blọgụ na - aga nke ọma. You na-eji saịtị mgbasa ozi mmekọrịta dịka Facebook na Twitter, mana ị gaghị enweta ihe ị tụrụ anya ya? Nwere ike iji ụfọdụ ntụzịaka na echiche ọhụụ?
Ee, nkwa nke mgbasa ozi mmekọrịta siri ike: Kpọtụrụ ndị ahịa na atụmanya ndị na-enweghị ike iru eru. Nke a pụtara ikpughe dị ukwuu, ụba okporo ụzọ na ohere azụmahịa ọzọ - ha niile enweghị ezigbo ndị ahịa.
Ma nye akụ na ụba a, onye na-achọghị azụmaahịa ọzọ?
Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, ị na-achọ ịhọrọ ọrụ mmekọrịta gị na mgbasa ozi n'ụzọ amamihe dị na ya, na-ejighị nhọrọ niile mebie. Naanị ị chọrọ ịma ihe kacha arụ ọrụ. Social Media Examiner nwere obi ụtọ ịkpọsa Social Media Success Summit 2011-ihe omume dị n'ịntanetị nke enyere iji nyere ndị na-ere ahịa na ndị nwe ụlọ ahịa aka inweta ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi.
Iri abụọ na abụọ n’ime ndị ọkachamara na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ụwa a na-akwanyere ùgwù ezukọtala ịkekọrịta atụmatụ ha kachasị ọhụrụ (lee oke akara na aka nri). Ha ga ekpughere usoro niile ọhụụ pụtara na usoro eji azụ ahịa azụmaahịa ịchọrọ ịma iji rite uru ozugbo na mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na (dị ka ọtụtụ) na-ahụta onwe gị site na nhọrọ niile nke mgbasa ozi mmekọrịta, ugbu a bụ ohere gị ịtọgbọ egwu maka ịga nke ọma na mgbasa ozi.
a n'ụzọ zuru ezu online ogbako amalite na Tuesday, May 3, ma gafee May 26. Ọ na-nkasi obi-agbasa ihe karịrị izu anọ (na e dere maka mgbe e mesịrị playback) ịnabata gị oge. Enweghị njem! Simply na-aga site na nkasi obi nke ụlọ ma ọ bụ ọrụ gị.
Tụlee nke a: 96% nke ndị bịara na ikpeazụ anyị Social Media Sumga nke Ọma Summit kwuru na ha ga-akwado nzuko a na enyi na gaa ọzọ (lee akaebe ha n'okpuru). Afọ a anyị nwere niile-ọhụrụ weghachite usoro mmepe di omimi nke ndi ahia.
Jide n'aka na- chebe ntụpọ gị na ogbako mmepe ọkachamara kachasị n'ịntanetị maka ndị na-ere ahịa na-achọ ịhazi mgbasa ozi mmekọrịta.
Nke a bụ ọdịnihu dị mma ọnụ!
PS Ọ bụrụ na ị na-eche, mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-emetụta ndị mmadụ site na netwọkụ mmekọrịta n'ịntanetị iji mepụta ikpughe, mụbaa okporo ụzọ, melite ogo ọchụchọ, zụlite mmekọrịta ndị ahịa, wuo ndị na-akwado akara siri ike, mepụta ogo dị mma ma too ahịa.
Pps Enwere m ike ikwu hoo haa? Nnyocha na-egosi na ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ịrụ ọrụ na azụmaahịa nwere mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike. Oge agabigaghi ka azụmaahịa gị na ndị ahịa na atụmanya site na mgbasa ozi mmekọrịta. Ma ọ bụrụ n ’ichere, ị ga - enye ndị asọmpi gị uru dị egwu nke siri ike imeri.
PPPS Kwesighi ime nke a naanị. Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche nke ịbanye na obodo nnabata nke ndị ọgbọ nwere otu uche (nzukọ ikpeazụ nke Social Media ịga nke ọma e rere na ndị bịara 2500) ndị ga-ekerịta ahụmịhe ha na amamihe ka ị na-agakọ n'okporo ụzọ a, gaa n'ihu na-agụ…
PPPPS Mee ugbu a ma chekwaa 50%! Pịa ịdebanye aha.
Nye Ka S Na-eziga Ozi E-mail?
Ọkara Ndụ Ndụ: Mgbe Ọ B NOTGH Bo ịkwado Ya